काठमाडौं– महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालसँगै रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले एक वर्षमा एक हजार ९ सयलाई शल्यक्रिया सेवा दिएको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सेन्टरबाट एक हजार तीन सयले क्याथप्रोस्युडर (मुटु सम्बन्धी) सेवा लिएका छन्। बुधबार वार्षिकोत्सवको अवसरमा सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राडा उत्तमकृष्ण श्रेष्ठले सेवा लिने...
किरण लोहनी- नाम–डण्डु चेपाङ ठेगाना– घ्याल्चोक, छत्तिवनगैह्रा गाउँ । हुन त यो गाऊँको सबै चेपाङ परिवार अनेक तरहले गरीविसँग जुधिरहेकै छ, तर पनि गाउँमा सबभन्दा गरीव र दुखी को छ ? भनेर सोध्यो भने सबैले भन्छन्, डण्डु चेपाङ । दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्दै आएका यो गाऊँका कुनै पनि चेपाङ परिवार सुखी लाग्दैनन् । तर पनि साराका सारा गाउँले आफूभन्दा पनि दुखी...
रियल मड्रिडलाई समस्या, बेलको चोट ‘ग्रेड टू’
वैशाख १३ – रियल मड्रिडका फरवार्ड ग्यारेथ बेलले यो सिजनका बाँकी महत्वपूर्ण खेल गुमाउने खतरा बढेको छ । पिँडौलाको चोटका कारण बेल सिजनका बाँकी खेलमा मैदान बाहिर रहने खतरा बढेको हो । स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत गएको आइतबार राति भएको इएल क्लासिकोको ३९ औं मिनेटमा बेल चोटग्रस्त भएका थिए । रियल मड्रिडले बेलको पिँडौलाको चोट दोस्रो श्रेणीको हरेको बताएको छ । तर उनी कहिलेसम्म मैदान...
ट्रम्पको मुख्य चुनावी एजेन्डा ओझेलमा, पर्खालका लागि खर्च जुटाउन समस्या
वैशाख १३ – अमेरिकी कांग्रेसले यो हप्ता खर्च सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । तर यो विधेयकमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावको अभियानको मुख्य एजेन्डाको रुपमा रहेको मेक्सिकोसँगको सीमामा बनाउने भनिएको पर्खाल सम्बन्धी खर्च समावेश नरहने संकेत मिलेको छ । कांग्रेसमा रहेका रिपब्लिकनले नै राष्ट्रपति ट्रम्पलाई खर्च सम्बन्धी विधेयकमा सीमा पर्खाल सम्बन्धी कुरा...
रामेछाप नगरपालिकामा कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवार घोषणा
१३ बैशाख, रामेछाप । रामेछापको पूरानो जिल्ला सदरमुकाम समेटिएको रामेछाप नगरपालिकामा प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मेयर उपमेयरको टुंगो लगाएका छन् । एमालेले यसअघिनै रोशन पाख्रिनलाई मेयरमा उम्मेदवार बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले बुधवार मेयरमा नगरवहादुर महर उपमेयरमा सिर्जना खड्काको नाम टुंगो लगाएको हो । पार्टीका जिल्ला सभापति लवश्री न्यौपाने रसचिव...
नायिका रीमा विश्वकर्मा अहिले चलचित्र भन्दा म्यूजिक भिडियोमै बढी सक्रिय छिन् । बिहेपछि पनि कलाकारीतामा सक्रिय रीमालाई चलचित्र क्षेत्रले भने खास सफलता दिन सकेन । तर, उनी म्यूजिक भिडियोमा भने चलेकी मोडल हुन् । उनै, रीमाले मोडल विकास लामिछानेसँग एक गीतको म्यूजिक भिडियोमा मोडलिङ गरेकी छिन् । अनुव पाण्डे र आगा लामाको स्वरमा समावेश ‘शुन्य शुन्य’ बोलको गीतको म्यूजिक...
भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मालपोतका ६ कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दर्ता
१३ बैशाख, काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व छली गरेको आरोपमा काठमाडौ मालपोत कार्यालयका ६ जना कर्मचारी विरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । काठमाडौं टोखा नगरपालिका वडा नं. १२ को जग्गा बिक्री गर्दा कम मूल्यांकन गरी राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व छलेको आरोपमा अख्तियारले उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । मुद्दा दायर भएका कर्मचारीहरुमा...
रंगशाला बल्ल भत्काउन थालियो, बन्ने कहिले ?
काठमाडौं, वैशाख १२ – सामान्य बिग्रेभत्तेको र फोहोरै फाहोर भए पनि रंगशालामा खेलकुदका गतिविधि हुन्थे, नेपालको फुटबल खेल हुँदा हजारौं समर्थकले हौसला बढाउँथे । तर परारसालको भूकम्पमा भत्किएर खेल खेलाउन अयोग्य भएपछि २ वर्षयता रंगशालामा कुनै पनि खेल प्रतियोगिता भएका छैनन् । भूकम्पमा विशिष्ट र साधारण प्याराफिट बस्न अयोग्य भएका छन् भने, पौडी पोखरी र प्रशासनिक भवन पनि ध्वस्त भएको...
उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमः ह्वाइट हाउस ब्रिफिङमा सिनेटरलाई बोलाइयो
वैशाख १२ – अमेरिकाले उत्तर कोरियाको मिसाइल तथा परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । यही क्रममा उत्तर कोरियाको विषयमा जानकारी गराउन अमेरिकी सिनेटका सबै सदस्यलाई ह्वाइट हाउसमा बोलाइएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यसरी सिनेका सबै सदस्यालाई कुनै एक विषयमा जानकारी गराउन वा छलफलका लागि ह्वाइट हाउस बोलाउनु असामान्य मानिन्छ । उत्तर कोरियाको विषयमा...